इतिहासमा थोरै दिनहरु मात्र स्वर्ण अक्षरले लेखिन्छन् जुन दिनले र्ईतिहासको नै नेतृत्व गरेको हुन्छ । नेपाली समाजको विकासक्रमा इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिने ति थोरै दिनहरुमध्ये सार्वाधिक महत्वपुर्ण दिन हो फागुन १ अथार्त आजको दिन अथार्त महान जनयुद्ध शुरु भएको दिन । महान नेपाली जनयुद्ध आज २२ वर्ष पुरा गरेर २३ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । नेपाली क्रान्तिको यो २२ वर्ष नेपाली इतिहासमा वर्गीय,जातिय,लिङगिय,क्षेत्रिय जागरणको सहित अढाय सय वर्ष परानो सामन्तवादी राजतन्त्रको अन्त्यको इतिहासको रुपमा इतिहासमा दर्ज भई सकेको छ । राजतन्त्रलाई अन्त्य गरे संघिय गणतन्त्र स्थापना गर्ने सपनाको त्यो झिल्कोले आज विपनामा नै जनताको छोरा छोरीलाई यो देशको राष्ट्रपति बनाई सकेको छ । २१औू शताब्दीमा बलिदानको विश्व किर्तीमान समेत कायम गरेको १० वर्षे महान जनयुद्धकाल नेपाली समाज विकास क्रममा आज सम्मको असाध्यै गतिशिल इतिहास पनि हो । तत्कालिन ने.क.पा.(माओवादीको )नेतृत्वमा सज्चालित महान जनयुद्धको जगमा सम्पन्न १९ जनआन्दोलन र संविधान सभामा नेपाली जनताको जित संगै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पछि नेपाली इतिहासको अर्को अध्याय शरु भएको छ । यति मात्र हैन नया संविधान वने पछि देश समाजवाद उन्मुख समेत भएको छ ।
बन्दुकको नालले आफनो स्वर्ग बचाउने सामन्तवाद र साम्रज्यवाद लाई ध्वस्त गरी सर्वहारा वर्गको जनवादी राज्य सत्ता स्थापना गर्न जनता द्धारा लडीने न्याय पुर्ण युद्ध जनयुद्ध हो । जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने यो सिद्धान्त सर्वहारा वर्गका महान नेता क.माओले प्रतिपादन गर्नु भएको हो । यही विन्दुलाई प्रस्थतावना मानेर २००७ सालमा नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भयो । क.पुष्पलाको नेतृत्वमा स्थापित पार्टीले स्थापनाकालमा जनवादी क्रान्तिको यात्रा तय ग¥यो । तर केही समयमा नै क्रान्तिकारी रणनिती र कार्यनिती निर्माण गर्न नसक्दा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन लामो समय सम्म टुटफुटमा फस्यो । नेपाली जनताको आमुल परिवर्तनको आकांक्षा माथी पटकपटक धोका दिने काम नेपालका राजनैतिक दलहरुले गरे । २००७ साल हुदै ०४६ साल सम्म आउृदा नेपालको कम्युनिष्ट भनिने पार्टीहरु जनताको शत्रु राजतन्त्रको अगाडी लम्पसार परे र फेरी नेपाली सर्वहारा श्रमजीवी न्याय प्रेमी जनतालाई धोका दिए । यस विचमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन संसोधनवदी र क्रान्तिकारी धारामा एकता शुरु भयो ।
संसोधनवादी धराको नेतृत्व विभिनन कम्युनिष्ट पार्टीहरुले गरे भने क्रान्तिकारी धाराको केन्द्र तात्कालिन एकता केन्द्र बन्न पुग्यो । त्यही विशिष्ट परीस्थीतीमा एकता केन्द्रका महामन्त्री क.प्रचण्ड द्धारा नेपाली समाजको एक हजार वर्षको इतिहास गहिरो अध्यान र गम्भिर समिक्षा गरी नेपाली समाजको प्रमुख चार अन्तरविराधहरुको पहिचान गर्ने काम भयो । सामन्तवाद र विस्तारवादको अपवित्र गठबन्धनवाट जन्मीएको दलाल नोकरशाही सामन्तवादी राजतन्त्र र नेपाली जनताको विचको अन्तविरोध नेपाली समाजको प्रधान अन्तरविरोधको रुपमा किटान गरीयो । यसरी क्रान्तिको निसाना नश्चित गरीए पछि क.माओको योदानलाई सर्वभौम मान्दै माओवाद र दिद्र्धकालिन जनयुद्धको रणनिती द्धारा राज्यसत्ता कब्जा गर्ने निती तय गरीयो । क्रान्तिकारीहरुले प्रतिकुलतालाई अनुकुतामा बदल्नु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ असध्यै प्रतिकुलताका विच ने.क.पा.(माओवादी) गठन संगै २०५२ साल फागुन १ गते नेपाली जनताको आफनै पहलमा आफनै मौलिकता र भव्यतामा महान जनयुद्धको थालनी गरीयो । यस अघि शान्तिपुर्ण ढंगले संयुक्त जनमोर्चाको नाममा राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजिविका संग सम्बन्धित ४० शुत्रिय माग सरकार समक्ष पेश गरीएको थियो । तर मागको सनुवाईगर्नूको साटो रुकुम रोल्पामा उल्टो रोमियो अप्रेशन सञ्चालन गरी न्याय माग्ने जनतामाथी दमन गरीयो । फलत अन्तराष्टिय प्रतिकुलता विच जनयुद्ध थाल्नै पर्ने वातावरण पैदा भयो ।
विचारधात्मक र कार्यदिशा सहि वा गलत हुनुले सवै कुराको निधो गर्छ भनरे क.माओले भने झै आगोको फिलुङको रुपमा शूरु भएको जनयुद्धले नेपाली जनताको चाहाना अनुरुप राजतन्त्रको अन्त्य मात्र गरेन, २१ औशताब्दीको पहिलो दशकमा नेपाली भुमीमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्दै विश्वमा नयाू विचार र शन्देश समेत दिन सफल बन्नेको छ भने जनवादी क्रान्तिका बाकी कार्यभार पुरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको नया मार्ग कोनु पर्ने वातावरण समेत तयार गरेको छ । ने.क.पा.(माओवादी) द्धारा नयाू नेपाल निर्माण गर्ने उदघोशका साथ सञ्चालित महान नेपाली क्रान्ति जनयुद्ध र यसले नेपाली समाजमा पारेको प्रभाव र जनयुद्धको नेपाली आयामहरु बारे केही चर्चा गरिनेछ ।
पहिलो–नेपाली समाजमा जनयुद्धले वैचारीक रुपमा ठुलो प्रभाव पार्न सफल बन्यो । माक्र्सवादको विकासको नाममा माक्र्सवादको सारतत्व वर्गसंघर्ष र सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व लाई नै तिलान्जली दिने , अधिभुतवादी पुूजीवादी बहुलवादको ठाउमा मालेमावादको संष्लेषण हिंसात्मक क्रान्ति को अनिवार्यता,सर्वहारा वर्गको दर्शन द्धान्दात्मक भौतिकवालाई जनयुद्धले नेपाली समाजमा सहि क्रान्तिकारी ढंगवाट स्थापित ग¥यो । माक्र्सवादको नाममा पुूजीवाद दलाली गर्नेहरुको बहुवादी दर्शन च्यात्चुत पार्न र क्रान्त्किारी माक्र्सवादको मार्गदर्शन अनुरुप नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडी बढाउन जनयुद्ध सफल बन्यो । यसरी नेपाली समाजमा गहिरो प्रभाव पारको छ । सवै खाले प्रतिक्रीयावाद यथास्थीतीवाद विचारलाई धुजा धुजा पारेको छ । नया संविधान बने पछि नया विचार संक्ष्लेषण् तर्फ अग्रसर गराएको छ ।
दोश्रो—राजनैतिकरुपमा खुस्चोभको दक्षिण पन्थी संसोधनवादको नेपाली प्रतिनिधीहरुको असली अनुहार जनता माझ उदाङगो पार्दै जनतालाई सचेत तुल्याउन जनयुद्ध सफल भयो । संसोधनवाद अवसरवाद सारसंग्रवादीहरु प्रक्रियावदमा समेत गिरेर जनताको न्याय पुर्ण मुत्ति mआन्दोलन माथी निर्लज हमला गर्दो रहेछन भन्ने तत्थ्य समेत नेपाली जनयुद्धले छलङ पारी दिएको छ । सवै प्रकारका संसोधनवादको विरुद्ध कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी हरुको एउटै केन्द्र बनाउने अभियानमा समेत जनयुद्धको अहम महत्व छ । विस्तारवाद र साम्राज्यवादको नेपाली दलालहरु जनयुद्धको कारण नराम्ररी पछरीएका छन । अर्का तिर कम्युनिष्ट नाम धारीहरु संसोधवादीहरु बढारीएका छन् । १९ दिने जनआन्दोलन संविधान सभाको निर्वाचन र स्ंघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषण सम्म आउदा र संघिय संविधान पनर्माण र कार्यान्वयन सम्म आउदा नेपाली जनयुद्धले नेपाली समाज विकासक्रमा अत्यन्तै गहिरो प्रभाव पारेको छ । भने जनयुद्ध नभएको भए यो परिवतर््ान सम्भव हुन्थेन भन्ने कुरा पुष्टी भएको छ ।
यस अतिरीक्त नेपाली जनयुद्धले नेपाली समाजमा थुप्रै प्रभाव पारेको छ । सामाजिकरुपमा रहेको रुढीवादी प्रचलन र मान्यताहरु अत्य गदै वैज्ञानिक मान्यताहरु अपनाउने तर्फ जनयुद्धले ठुलो प्रभाव पारेको छ । यस्तै जातिय ,क्षेत्रिय जागरणको हिसावले जनयुद्धले नेतृत्वकारी भुमीका खेलेको छ । जनयुद्धले एकात्मक राज्यसत्तँको ध्वस्त गदै उत्पीडित आदीवासी जनजातीलाइे अधिकार र स्वायत्तता सहितको संघिय राज्य स्थापना गर्ने सवाललाई जबरस्त स्थापित गरीदिएको छ । भलै अहिलेको संघिता अपुरो छ । उत्पिडित जाती र क्षेत्रमा मुक्तिको अभियानमा जुट्ने प्रेरण दिएको छ । आज संघियता र समानुपातिक समावेशी मान्यता नेपाली समाजको मान्यता बनेको छ यो नेपाली जनयुद्धले फैलाएको जनजागरणको उपलब्धी हो । दलित समुदायको अधिकार, महिलालाई निती निर्माण तहमा ३३ प्रतिशत सहभागीताको अधिकारको सवाल जनयुद्धको नै स्थापीत गरेको हो । यदी जनयुद्धमा महिला दिदी बहिनीले बन्दुक नउठाएको हुन्थ्यो भने आज उपलत्तधी निकै परको विषय हुन्थ्यो ।
नेपाली क्रान्तिको एउटा सर्वाधिक विशिष्ट समयावधिमा जनयुद्धले प्राप्त गरेको थुप्रै आयामहरुको संष्लेषण हो प्रचण्डपथ । २१ औ शाताब्दीको विश्वपरिस्थीतीको गहन अध्यायन गदै हाल सम्म संसारमा स्थापना भएका जनवादी सामाजवादी सत्ता र ति देशहरुमा भएका प्रतिक्रान्ति, र नेपाली जनयुद्धको आफनै अनुभवहरुको विकसीत विचार सृंखलाको संष्लेषण हो प्रचण्डपथ । सामुहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्याक्तिकोरुपमा अध्यक्ष क.प्रचण्डको नाममा प्रचण्डपथ संष्लेसित गरीएको हो । माक्र्सवादको तिनवटै संगठक अंगमा आफनो मौलिकतामा नयाू विचारको विकास गरेको छ । दर्शनको क्षेत्रमा मालेमाको नेपाली सामाजमा ईमान्दारी पुर्वक आतमासतीकरण गरीएकोछ । अन्तरविरोधको पहिचाहन परीचालन र अन्तरविरोधको सृजनामा समेत जोड दिईएकोछ । पार्टी विपरीतको एकत्वको रुपमा स्विकार एवंम एकता संघष रुपान्तरण ,विषेश रुपान्तरण को मान्यताको प्रयोग नेपाली क्रान्तिमा प्रचण्डपथका विकास हुन । राजनैतिक अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा नेपाली समाजको सहि वर्ग विष्लेण,दलाल नोकरशाही वर्गको पहिचान सर्वाधिक महत्त्वपुण सवालहुन । साथै जनयुद्धको अवधिमा नै जनकम्युनहरुको स्थाना र राष्ट्रिय स्वधिन अर्थतन्त्रको विकासमा जोड नेपाली क्रान्तिको आयाम हुन । वैज्ञानिक समाजवादको क्षेत्रमा क्रान्तिको कार्यदिशा दिर्घकालिन जनयुद्धमा शषस्त्र विद्रोहको फयुजनको रणनिती , दृढता र लचकता सहितको कार्यनिती निर्माण , २१ शताब्दीको जनवादको विकासवारे , जनमुक्ति सेना नेपालको निर्माण,आत्मानिर्णयको अधिकार सहित जातीय क्षेत्रीय स्वयत्तता राज्यको स्थापना आदी प्रचण्डपथको मुल आयामहरु हुन । आज सेना समायोन भई सकेको छ भने संघियताले पुर्णरुप प्राप्त गरी सकेको छैन । तर विस्तारेै त्यो दिशा तर्फ नै अगैसर छ ।
यसरी नेपाली जनयुद्धले आफनो मौलिकता र भव्यतामा विचार र विधीसमेतमा विकास गदै प्रचण्ड पथलाई बहसको लागी खुल्लाह गरेको छ । नया विकसित परिस्थीती अनुसार समाजवादी क्रान्तिको खाका कोर्ने तर्फ अगाडी बढीरहेको छ । साथै समाजवादी क्रान्तिको अभियानलाई पुरा गर्नु नया सिरा वाट वृहत बहस गर्दै कम्ुयनिष्ट केन्द निर्माण गर्ने अभियानमा जुटेको छ । समाजवादी क्रान्तिको खाकाआज क्रान्ति सम्पन्न गर्ने अभियान लाई पुरा गर्न ने.क.पा.(माओवादी ) ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र)बनेकोछ । अहिले हामी क्रान्तिको शान्तिपुर्ण विकासको चरणमा छौ । हामी कहिले सरकारको नेतृत्व पनि गरीरहेका छौ , कहिले सडकको तर हामी सत्तामा छैनौ । मात्र हामी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने दिशामा अघि बढीरहेका छौ । यसलाई गम्भीररुपमा बुझ्नु आवश्यक छ । अहिलेको हाम्रो जिम्मेवारी भनेको शान्ति प्रक्तियालाई तार्किक निष्कर्शमा पु¥याउने र नयाू संविधानलाई पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने साथै संविधान संशोधन गर्दै संघियतालाई पुर्णता दिन र शाकिया प्रणाली बदल दै प्रत्यक्ष रुपमा जनताले राष्टपति चुन्ने पुर्ण लोकतन्त्रको स्थापना गर्नु हो । यो संग संगै स्थीर सरकार द्धारा आर्थिक समृद्धी हाशिल गर्दै समाजवाद तर्फ अगाडी बढ्नु हो ।
आज हामी नयाू संविधान कार्यान्वन गर्दै प्रदेश सरकार गठन गर्दै गर्दा महान जनयुद्ध २२ वर्ष पुरा गरी २३ वर्षमा प्रवेश गरेको दिनलाई विस्र्यौ भने ईहिासमा हामीले भुल गरी रहेको हुनेछौ । आगामी दिनमा संविधानले जनतालाई दिएकोे अधिकारलाई स्विकार गर्दै संघियता, समानुपातीक प्रणाली , दलित महीला को अधिकार , स्वधिन अर्थतन्त्र आर्थिक समृद्धी , प्रेस स्वत्न्त्रता, राष्टियता सहितको सवाल लाई दरो संगले कार्यन्वयनमा ल्याए र समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडी बढे मात्र जनयुद्धको सम्बोधन हुनेछ र यस प्रक्रियामा हजारौ शहिदहरुको सपना सापेक्षितरुपमा साकार हुनेछ । जनयुद्धको २३ औ वर्ष गाठको अवसरमा पुन एकपट संकल्प गरौ । सम्पुर्ण क्रान्त्किारीहरु एक होऔ । क्रान्तिको शान्तिपुर्णविकास गदै समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने दिशामा अगाडी बढौ । निरन्तर क्रान्ति जनताको निरन्तर उत्सव पनि हो । जनयुद्ध जिन्दावाद । वीर शहिद लाल सलाम ।